Warshadaha Taayirada Badbaadada Slip -ka ee Sunta Nabadda - Shiinaha
Aluminium Hubin Saxan Tread
Aluminium Dheemanka Tread Sheet
Taarikada Tread Safety Safety Slip
Xaashida Aluminiumka Anodized
Bir qabow la duubay
AS 1397 G550 (HRB> = 85), ASTM A6aets
Big Zero Spangle Waayo, Darbiyada Dibada kulul Galvaniz la galisay ...
Bright 1100 1050 3003 Aluminum Aluminium Saxan 3 Ba ...
6061-T651 Sheet Aluminium
1050 1060 1100 gariiradda Sheet Aluminium
Premium Shiinaha Aluminium Chechkered Plate Sheet Manuf ...
Iibinta kulul Qiimaha hoose Aluminium Aluminium
Iibinta kulul 8011 Aluminium
Iibinta kulul 3003 Aluminium
Resistance Sare Daxalka 6061 T6 Aluminium Tread ...
Resistance fiican miridhku Aluminum Checkered Plate M ...
Waraaqaha Aluminium ee Tread Tread Slip-Resistant ...
Alaab -qeybiyeyaal Aluminiin Aluminiin Tayo Wanaagsan leh
Guddiyada Aluminiumka Gudaha
Soo -saaraha Sheet Aluminium Dheemanka
3003-H22 Bright Finish Diamond Tread Plate
1060 Aluminum Aluminum For Sale / aluminium sheet muraayad
Xaashida muraayadda Aluminium waxaa loola jeedaa saxan aluminium khafiif ah oo ay soo saaraan habab kala duwan sida rogid iyo nadiifin. Iftiiminta iftiinka si wax ku ool ah, waxaa sidoo kale loogu yeeraa xaashid milicsiga. Lakab khafiif ah oo dhuuban ayaa badiyaa la mariyaa si loo daboolo sagxadiisa. Midabada caadiga ah waxaa ka mid ah buluug, lacag, jaalle iyo cagaar.
1100 xaashida saxanka aluminium
Weli waxaa jira astaamo iyo astaamo u gaar ah oo ka kooban 8 -da aluminium ee taxanaha ah. Sababtoo ah hantidan heerka koowaad ah ee aluminium-ku-saleysan aluminium, saxan aluminium oo la shubay ayaa hadda aad iyo aad loogu isticmaalay bulshada casriga ah. Sidaa darteed, sida loo doorto saxanka xaashida aluminium ee ugu habboon ganacsigaaga iyo inta uu le'eg yahay aluminium dhammaan dhibaatooyinka waa in si degdeg ah loo xalliyaa.
Anti Slip Checker Plate Jaranjarada
Taabashada Aluminium-ka-hortagga Slip-ka Aluminiinka Taarikada waa caado loo sameeyay oo waa la soo saari karaa si loo waafajiyo nooc kasta oo aag ah oo noqon karta sibiibix, halis ah oo khatar ah tusaale mesh/grille, saxan la hubiyay, saxan aluminium, shub, alwaax.
Heerka Ganacsiga Sheet Aluminium
Aluminium iyo aluminium aluminium ayaa si tartiib tartiib ah u noqonaya xubno xooggan warshado kala duwan oo casri ah xilligan. Waqtigan xaadirka ah, alaab tayo sare leh oo ka samaysan aluminium aluminium ayaa hadda kaalin muhiim ah ka ciyaaraya nolosheena.
Daawaha: 1050 1060 1100 3003, 3105, 5052, 5005, 5754,5083,5086, 5182, 6061 6063 6082, 7075, 8011…
Xanaaq: HO, H111, H12, H14, H24, H 32, H112, T4, T6, T5, T651
Dusha: dhalaalaya/Mill/Emboss/Diamond/2bar/3bar/5 baararka/Anodized
Dhumucdiisuna: 0.2mm in 300mm
Ballaca: 30mm ilaa 2300mm
Dhererka: 1000mm ilaa 10000mm.
Waxaan goyn karnaa dhererka / ballaarka
Isha raqiis ah oo aan siib lahayn Brite aluminium daawaha tuman jaranjarada qaababka hubiyaha saxanka
RuiYi Aluminium Sida mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee qurxinta aluminium soo saareyaasha saxan iyo alaab-qeybiyeyaasha ayaa bixin kara dhammaan noocyada saxanka hubiyaha, sida dheemanka sagxadda saxanka, saxanka tuman ee dhaadheer, jaranjarooyinka aan jajaban iyo jaranjarada jeegga
Waraaqaha aluminiumka waxaa loo isticmaalaa in lagu dhiso alaabo kala duwan oo lagama maarmaan u ah guryaha, baabuurta, aerospace iyo warshadaha badda. Tusaale ahaan, xaashida aluminiumka waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo dhinacyada iyo saqafka guryaha iyo darfaha jirka ee baabuurta, diyaaradaha iyo doonyaha. Sababtoo ah xaashida aluminiumku waa kuwo khafiif ah oo u adkaysta miridhku iyo daxalka, way fududahay in la rakibo oo waa kuwo aan cimiladu caddayn. Waxay sidoo kale si fiican u nuugaan naxdinta, sifo badbaado oo muhiim u ah baabuurta.
Cinwaanka: Xingzhengdadao, Xiaoxian, Suzhou, Gobolka Anhui, Shiinaha
Wax soo baara Qiimeeyaha